TTSweet: Male or Female ?????
မဆွိတီတို့ရုံးမယ် ဘော့စ်အသစ်ရောက်ကတည်းက လုပ်ပုံလုပ်နည်း ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေ နဲနဲပြောင်းပါတယ် ... အရင်ကတော့ တစ်နေကုန် ကွန်ပြူတာနဲ့ ဒီဇိုင်းလုပ် ၊modeling
လုပ်ဆိုတော့ အလုပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိပါ ...
အခုတစ်လော အလုပ်ကပါးနေလေတော့ အရင်ဘော့စ်လို Lab ထဲမှာ မခိုင်းပဲ နောင်လာမဲ့ Product တို့တွေမှာ အလွယ်တကူယူသုံးရအောင်ဆိုပြီး Connector လေးတွေရှာခိုင်းပါတယ် ...Hand Phone တို့ PDA တို့မှာသုံးတဲ့ ဘက်ထရီသွင်းတဲ့ Connector မျိုးလေးတွေပါ ...
အဲလိုအင်တာနက်ထဲတစ်နေကုန်ရှာရတာ အင်မတန်အိပ်ငိုက်ပါတယ် ... မနေ့ကတော့
အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ သူ့Connector လိုချင်ရင် သူ့ဆီမှာRegister
လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ ကွန်ပျူတာမှာပဲ သူ့မေးထားတာလေးတွေ ဖြည့်ရတယ်ပေါ့ ... ဖြည့်နေရင်းနဲ့ လူကတော်တော်ကို အိပ်ငိုက်နေပြီ ... ကွန်ပျူတာကလည်းကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ၀ါးနေပြီ ... ဒါပြီးရင်တော့ ကော်ဖီတစ်ခွက်တော့ ဖျော်သောက်မှဖြစ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးသားပါ ...
User Name တဲ့ ... Email address တဲ့ ... Password တဲ့ ....
ဘယ်နိူင်ငံကလဲ ... ဘယ်ကုမ္ပဏီကလဲ .... Male လား .... Female လား ...
အစရှိသည် ... အစရှိသည် တွေဖြည့်ပြီးသကာလ ... တစ်နေရာရောက်တော့
“”No. of pins ” တဲ့ ဆိုတော့ အိမ်ချင်မူးတူးနဲ့ ငါ့မှာဘယ်နှစ်ပင်ရှိပါလိမ့်ဆိုစဉ်းစား
ရင်း ... နောက်ဖြည့်ရမှာကြည့်တော့ ““Material of Body” ဘာပစ္စည်းနဲ့လုပ်ထားတာလဲဆိုမှ
ဖျက်ကနဲလန့်နိုးလာတယ် ... ငါ့ဘော်ဒီတောင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတာလဲမေးနေပြီဆိုတော့ မဟုတ်တော့ဘူးဆို ပြန်ကြည့်မှ ဖောင်ဖြည့်ရမဲ့အပိုင်းက Connector အကြောင်းရောက်နေတာကိုး ...
အပေါ်က Male လား .... Female လား ဆိုတာလည်း Connector ကိုပဲပြောတာပဲ ...
ကိုရှာတာက Male ... ဖြည့်ထားတာက်Female တဲ့ ... ကိုယ့်ကိုမေးတယ်ထင်နေတာကိုး ...
တော်သေးတာပေါ့ “”့ No. of pins” ကယ်သွားလို့ ... လန့်နိုးလာတာ ...
(Pins ဆိုတာ Connector တွေမှာပါတဲ့ လျှပ်စစ်စီးတဲ့ ပင်အပ်လောက်ရှိတဲ့ ကြေးနီချောင်းလေးတွေပါ ... ပုံမှန်ဆို ၂ချောင်းကနေ အချောင်း ၅၀လောက်ရှိပါတယ်...)
Posted by T T Sweet at 10:09 AM
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ လက်မလွန်သေးလို့ :P
မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲရယ်သွားမိပါတယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းဖြစ်သွားစေပါတယ်
MMR Marine October 22, 2009 at 1:41 AM
တနေ့ကပေါ့ အင်မတန်မှအထွန့်တက်တတ်သူတစ်ယောက် နေ့တိုင်းလိုလို မောင်မောင်ချစ်ကိုထုံးဆံအတိုင်းဘာဟင်းနဲ့စားလဲ.. မေးတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်က ပုံမှန်အတိုင်း ဒီနေ့တော့ ပဲကြီးဟင်းချက်တယ်ဗျာ..ဒီလူအထွန့်တက်တတ်တာသိနေတဲ့အတွက်..ကမန်းကတမ်း ကျွန်တော်ပဲ သူ့အရင် အူးအောင်အထွန့်တက်ပြလိုက်ပါတယ်..ဒီလိုပါ..ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီဟင်းစားတာမဟုတ်ဘူးဗျို့..ကြိုက်လို့စားတာပါ..ဒါတောင်သူအထွန့်တက်လိုက်ပုံက..မသိပါဘူးဗျာ..ခင်ဗျား